राहुलको सपना अर्बपति होटेलियर | cgcorpglobal.com - राहुलको सपना अर्बपति होटेलियर
राहुलको सपना अर्बपति होटेलियर
आकर्षक कलाकृतिको सुन्दर सजावट । रुफटप रेस्टुरेन्टसँगै आकर्षक स्विमिङ पुल पनि । एसियाली खानाका पारखीका लागि ‘अकारी’जस्तो विख्यात परिकार र नेवारी स्वाद पनि । होटेल व्यवस्थापनमा विश्वभर प्रख्याति कमाएको ताजको आतिथ्य सत्कार । झम्सिखेलस्थित ‘भिभान्ता काठमाडौँ’को दसौँ तलामा पुगेर नजर घुमाउँदा दुबई र सिंगापुर पुगेको अनुभव हुन्छ ।
सिजी हस्पिटालिटीका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीको बुझाइमा भिभान्ता होटेल ‘भेरीभेरी भाइब्रेन्ट, कलरफुल, सेक्सी एन्ड लाइभ्ली’ बनेको छ । १० तले भवनमा ११० कोठा छन् । विश्वभर होटेल साम्राज्य फैलाउन जोडतोडले लागेको चौधरी समूहले नेपालमा खोलेको तेस्रो होटेल हो, यो । माओवादी द्वन्द्वमा दरबारमार्गको अन्नपूर्ण होटेलबाट भागेको ताज झन्डै डेढ दशकपछि काठमाडौँ फर्किएको हो । ‘झम्सिखेलको होटेल हाम्रो लागि मात्र होइन, ताजका लागि पनि महत्वपूर्ण प्रोपर्टी हो,’ राहुल सुनाउँछन् ।
चौधरी समूहले सन् २०१५ मा कुपन्डोलस्थित होटेल समिटको स्वामित्व किनेर नेपालको हस्पिटालिटी बिजनेसमा प्रवेश गरेको हो । तीन वर्षमा तीनवटा होटेल पुर्‍याइसक्यो । ‘नेपालमा होटेल विस्तार रफ्तारमा भइरहेको छ,’ राहुल भन्छन्, ‘हामी नेपालको हस्पिटालिटीमा ठूलो लगानी गर्दै छौँ ।’ समिट होटेल डच नागरिक विलियम गल्चरले खोलेका हुन् । पछि उनले स्थानीय राजकृष्ण श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । समिट होटेलको बहुमत सेयर चौधरी समूह र एनई समूहसँग छ । समिटमा ८३ कोठा छन् । ११० कोठा थपिँदै छन् । राहुलको टिम समिटको स्तरोन्नति गरी ‘वल्र्ड क्लास’ बुटिक होटेलमा परिणत गर्न कस्सिएको छ ।
चौधरी समूहले अघिल्लो वर्ष चितवनको मेघौलीमा जंगल सफारी रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्यायो । जंगल सफारीका सौखिन खर्चालु पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित खोलिएको मेघौली सेराई रिसोर्ट देशकै महँगो होटेलमा पर्छ । रिसोर्टमा एउटा प्रेसिडेन्सियल स्विट भिल्ला, १६ जुनियर स्विट भिल्ला र १२ डिलक्स कोठा छन् । सबै भिल्लामा निजी स्विमिङ पुल छ ।
मेघौली सेराईको व्यवस्थापन ताजले सम्हालिरहेको छ । ‘हामीले ताजलाई मेघौली सेराईमार्फत नेपाल भित्र्याएका हौँ,’ राहुल भन्छन्, ‘मेघौली सेराईको कोठा प्रतिरात ४ सयदेखि ७–८ सय डलरसम्म बिक्री गरिरहेका छौँ ।’ यसअघि निकुञ्जभित्र सञ्चालित टाइगर टप्स जंगल लजले महँगो मूल्यमा कोठा बिक्री गथ्र्यो । धनाढ्य पर्यटक भित्र्याउँथ्यो । जंगलभित्रको टाइगर टप्स वि.सं. ०६९ मा साउनमा बन्द गरियो ।
चौधरी समूहले भारतको मध्यप्रदेशमा ताज ग्रुपसँगको साझेदारीमा चारवटा हाई एन्ड सफारी रिसोर्ट चलाइरहेको छ । मेघौली सेराई पाँचौँ सफारी रिसोर्ट हो । राहुलले सफारी व्यवसायलाई ‘हाई एन्ड’ क्याटेगोरीमा राखेका छन् । चौधरी समूहले विश्वभरि आफ्ना, साझेदारी र व्यवस्थापनका गरेर ८५ होटेल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ४० होटेल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै छन् । राहुल भन्छन्, ‘मेरो नजरमा सबैभन्दा उत्कृष्ट फिलिपिन्सको वेलनेस रिसोर्ट ‘द फार्म’ हो । दोस्रो उत्कृष्ट होटेलमा मेघौली सेराई पर्छ ।
चितवनको भरतपुरमा चौधरी समूहको चौथो होटेल तयार हुँदै छ । सपिङ मलसहितको कम्प्लेक्समा ‘द फर्न रेसिडेन्सी चितवन’ छिटै सञ्चालनमा आउँदै छ । यो बिजनेस होटेलमा ४८ कोठा हुनेछन् । सपिङ मलसहित होटेलमा झन्डै दुई अर्ब लगानी हुँदै छ । ‘द फर्न रेसिडेन्सी’ सिजी हस्पिटालिटीद्वारा प्रवद्र्धित ब्रान्ड हो । यो ब्रान्डले मध्यमस्तरका होटेल तथा रिसोर्ट चलाइरहेको छ । राहुलले पाँचौँ होटेल काठमाडौंको कान्तिपथमा खोल्दै छन्, ‘वर्ल्ड क्लास’ व्यावसायिक मलसहितको लक्जरी होटेल । राजधानीको बीचमा १६ तलाको भवन ठडिनेछ । सोही भवनमा पाँचतारे होटेल हुनेछ । ‘नेपालको हस्पिटालिटीमा छिर्न ढिलाइ पक्कै भएको हो, तर जब हामी प्रवेश गर्‍यौँ, रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरा र लुम्बिनीमा पनि दुईवटा होटेल खोल्ने योजनामा छौँ ।’
चौधरी समूह हस्पिटालिटी बिजनेसमा प्रवेश गरेको झन्डै दुई दशक पुग्न लागिसक्यो । विनोद चौधरीले श्रीलंका र माल्दिभ्सको होटेलमा ताज ग्रुपसँग साझेदारी गरेका थिए । त्यहीँबाट चौधरी समूहको हस्पिटालिटी यात्रा सुरु भएको हो । सन् २००१ तिरको कुरा हो, श्रीलंका र माल्दिभ्स दुवै मुलुकमा द्वन्द्व चर्किएको थियो । आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्न स्थानीय लगानीकर्ता पनि डराइरहेको अवस्था थियो । त्यहाँ ताजले चलाइरहेका होटेल समस्यामा परिरहेका थिए ।
ताजले विनोद चौधरीलाई सहकार्यको प्रस्ताव राख्यो । जति धेरै जोखिम, त्यति धेरै अवसर । विनोदले जोखिमभित्र अवसर पहिल्याए । ताजसँग श्रीलंका र माल्दिभ्सका होटेलमा सहकार्य गरे । सुरुवातमै (सन् २००१) श्रीलंकामा ताज समुद्र, माल्दिभ्समा ताज एक्जोटिका र ताज कोरला रिफ सञ्चालनमा आयो । अहिले चौधरी समूहका श्रीलंकामा १७ होटेल पुगिसकेका छन् । अब थप चार होटेल सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
माल्दिभ्समा दुईवटा सञ्चालनमा छन् । भारतका विभिन्न ठाउँमा ५४ होटेल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अझै २६ होटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको राहुल बताउँछन् । इन्डोनेसियामा ८ होटेल र चीनमा चारवटा होटेल चलिरहेका छन् । चीनमा १० वटा होटेल पाइपलाइनमा रहेको राहुल बताउँछन् । अफ्रिकामा दुईवटा होटेल किन्दै छन् । अमेरिकामा दुईवटा होटेल सञ्चालनमा छन् । आफूले अमेरिकी मुलुकमा होटेलको राम्रो सम्भावना देखेको राहुल बताउँछन् । ‘अमेरिकी मुलुक र क्यारेबियनतिर राम्रो अवसर हेरिरहेका छौँ, हामी अमेरिकामा ४० वटाजति होटेल चलाउन चाहन्छौँ,’ राहुल सुनाउँछन् ।
फिलिपिन्समा वेलनेस रिसोर्ट ‘द फार्म’ सञ्चालनमा छ । तीनवटा पाइपलाइनमा छन् । ओमान, अफ्रिका, मलेसिया, सेसेल्समा पनि होटेल सञ्चालनमा छन् । राहुलका अनुसार भुटान, थाइल्यान्ड र युएईमा धमाधम होटेल निर्माण भइरहेका छन् । दुबईमा २०७ कोठाको ताज जेएलटी दुबई सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ । भुटानमा तीनवटा होटेल खोलिँदै छ । भुटानको पारोमा होटेल निर्माण सुरु भइसकेको छ । भुटानका होटेलहरू जिंकजर्नी ब्रान्डबाट सञ्चालन हुनेछन् ।
राहुल यतिमै रोकिनेवाला छैनन् । लक्ष्य अलि फराकिलो छ । उनी लामो ‘रेस’मा उत्रिएका छन् । विश्वका डेढ दर्जन मुलुक पुगिसके । अझै ‘इस्ट टु वेस्ट’ फैलिनु छ । उनको लक्ष्य छ– सन् २०२० सम्म विश्वका विभिन्न देशमा २०० होटेल पु¥याउने । सन् २०२३ सम्म नेपालमा मात्रै १३ होटेल खोल्ने । राहुलका अनुसार यो सूचीमा आफ्नै प्रोपर्टी र म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्टका होटेल पनि समावेश हुनेछन् । उनी लक्ष्य भेटाउन दिनमा १८ घन्टासम्म काम गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामी जुन रफ्तारमा छौँ, यो रफ्तारले लक्ष्य पक्कै भेटाउन सकिन्छ,’ उनकोे विश्वास छ ।
नेपालको एउटा व्यावसायिक घरानाले दुनियाँभर दुई सय होटेल सञ्चालन गर्नु चानचुने कुरा होइन । राहुलका बुबा विनोद चौधरी नेपालको एक मात्र फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा छन् । राहुल पनि हस्पिटालिटी क्षेत्रबाटै नेपाली ‘बिलिनियर्स’ बन्न चाहन्छन् । यो लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ ? राहुल तत्कालै जवाफ फर्काउँछन्, ‘सन् २०२५ सम्ममा,’ थप्छन्, ‘हाम्रो हस्पिटालिटी कम्पनीलाई २०२५ सम्म बिलियन डलरको कम्पनी कसरी बनाउने भनेर दिनरात खटिरहेको छु ।’
राहुल विश्वभर होटेलको साम्राज्य फैलाउन ‘फन्ड म्यानेजमेन्ट’लाई गतिलो माध्यम बनाउँदै छन् । इन्डियाको एउटा ग्रुपसँग मिलेर दुई सय मिलियन डलरको फन्ड चलाउँदै छन् । अहिले इन्डियामा धेरै होटेल समस्यामा परिरहेका छन् । तारे होटेलहरू सस्तो मूल्यमै धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । त्यो फन्डको रकम यस्तै समस्याग्रस्त होटेलमा लगानी हुनेछ ।
‘हामीलाई होटेल कसरी चलाउने आइडिया छ, उचित मूल्यमा समस्याग्रस्त होटेल किन्छौँ र चलाउँछौँ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘होटेलको भ्यालु बढाई ५–७ वर्षमा बिक्री गरेर नाफा लिन्छौँ ।’
आफूहरू युरोपमा वान बिलियन युरोको फन्ड सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् । अमेरिकामा पनि फन्ड सञ्चालन गर्नका लागि पार्टनरसिप गरिसकेका छन् । यो फन्डबाट कति होटेल चलाउन सकिन्छ ? राहुलको अनुमान छ, ‘इन्डियामा दुई मिलियन डलरको फन्डबाट १० वटा होटेल किन्न सकिन्छ । युरोपमा वान बिलियन डलरबाट १० देखि १५ होटेल किन्न सकिन्छ ।’
चौधरी समूह हस्पिटालिटी बिजनेसमा प्रवेश गरेको झन्डै दुई दशक पुग्न लागिसक्यो । विनोद चौधरीले श्रीलंका र माल्दिभ्सको होटेलमा ताज ग्रुपसँग साझेदारी गरेका थिए । त्यहीँबाट चौधरी समूहको हस्पिटालिटी यात्रा सुरु भएको हो ।.
चौधरी समूहले खाली होटेलमा लगानी मात्र गरेको छैन । उसले लगानी गरेका होटेल विश्वभर परिचित छन् । ‘हामीले चलाएका होटेल युनिक हुनुपर्छ,’ राहुल थप्छन्, ‘हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा युनिकपन दिन चाहन्छौँ ।’ चौधरी समूहका श्रीलंकाको ताज समुद्र, माल्दिभ्सको ताज एक्जोटिका र द कोरल लिफ, नेपालको मेघौली सेराई, फिलिपिन्सको द फार्म, जेटविङ भिलयुआना, इन्डियाका सफारी रिसोर्टहरू विश्वभर प्रसिद्ध छन् । कहिलेकाहीँ आफन्त र साथीभाइ राहुललाई सुनाउँछन्, यति धेरै होटेल छन्, तिमीलाई बसीबसी खान पुग्छ, किन दौडधुप गर्छौ ? पक्कै पनि, अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदा पनि उनलाई मात्र होइन, धेरै पुस्तालाई काम गर्नुपर्दैन । तर, उनलाई होटेल व्यवसायबाटै ‘बिलिनियर्स’ बन्नु छ । चौधरी समूहको पोर्टफोलियोमा सयौँ होटेल दर्ज गर्नु छ । बुबा विनोद चौधरीको सपना पनि आफूले सुरु गरेको हस्पिटालिटी बिजनेसलाई छोराले विश्वभर फैलाओस् भन्ने छ । यही सपना पूरा गर्नका लागि राहुल दौडिरहेका छन् । वर्षमा १०–१५ होटेल थपिरहेका छन् ।
राहुल सन् २००६ तिर हस्पिटालिटी बिजनेसमा प्रवेश गर्दा आधा दर्जन होटेल सञ्चालनमा थिए । १२ वर्षको दौरानमा आफ्ना, साझेदारी र व्यवस्थापनका गरेर ८५ होटेल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । निकट भविष्यमै ४० होटेल सञ्चालनमा आउनेवाला छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? ‘हाम्रो दूरदृष्टि, जोखिम बहन गर्ने क्षमता, अवसर र अथक मिहिनेतले सम्भव भयो,’ राहुल सुनाउँछन् । यदि बाबुले श्रीलंकाको ताज समुद्र होटेलमा साझेदारी गर्ने हिम्मत नगरेको भए होटेल साम्राज्य खडा हुने थिएन । विश्वको हस्पिटालिटी बिजनेसमा चौधरी समूह ‘मस्ट डाइभर्सिफाई’ ग्रुपमध्येमा पर्छ ।
चौधरी ग्रुपले आफैँ प्रवर्द्धन गरेका ६ वटा होटेल ब्रान्ड छन्– द जिंक, द फर्न होटेल एन्ड रिसोर्ट, द जिंकजर्नी, द फर्न रेसिडेन्सी, बेकन, द जिंक लिभिङ । विश्वव्यापी होटेल विस्तार गर्ने क्रममा चौधरी समूहले प्रख्यात बहुराष्ट्रिय ब्रान्डहरू ताज, ताज सफारी, ताज भिभान्ता, र्‍याडिसन, सिएचसी, अलिला, जेटविङ, द फार्म, ताज एक्जोटिका रिसोर्ट एन्ड स्पालगायत ब्रान्डसँग साझेदारी गरेको छ । ताज समुद्र (श्रीलंका), ताज एक्जोटिका (माल्दिभ्स), ताज कोरल रिफ (माल्दिभ्स) सञ्चालनमा छन् । ताज सफारी ब्रान्डमा भारतको मध्यप्रदेशमा ४ र नेपालमा एक सफारी रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा ३८५ कोठाको र्‍याडिसन जेएफके होटेल सञ्चालनमा छ । अलिलासँगको सहकार्यमा इन्डोनेसिया, ओमन, अमेरिका, इन्डिया र चीनमा होटेल चलिहरहेका छन् ।
जेटविङ ब्रान्डबाट श्रीलंकामा होटेल चलिरहेको छ । जिंक जर्नी ब्रान्डमा श्रीलंकामा दुईवटा होटेल चलिरहेका छन् । फिलिपिन्समा वेलनेस रिसोर्ट द फार्म सञ्चालनमा छ । नेपालको समिट होटेलमा एनई ग्रुपसँग साझेदारी गरेको छ । ताजसँग मिलेर दुबईमा १०७ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । भुटानका होटेलहरू जिंक जर्नी ब्रान्डबाट चल्नेछन् ।
← बिनोद चौधरीका कान्छा छोराले रोजे भारतीय ब्यापारीकी छोरी अनुश्री,आज भयो इनगेजमेन्ट।
Mr. Binod Chaudhary declares subsidy for4months in CG Landmark →